Filannoo Xaaliyaan: Gareen warra uummatummaa cimuun siyaasa Xaaliyaan danqeera - BBC News Afaan Oromoo
Filannoo Xaaliyaan: Gareen warra uummatummaa cimuun siyaasa Xaaliyaan danqeera
Goodayyaa suuraa Lakkoosi dursee ba'e akka mullisutti paartiin kamiyyu sagalee caalmaa hin mo'anne
Xaaliyaan erga namoonni garee warra dhudhaasaaniitti cichaniifi paartiilee ummattummaa hedduu qabaniif sagalee kennanii gara paarlaamaa hojii ala gochuutti deemaa akka jirtu tilmaamni bu'aa filannoo hangi tokko ba'e ni mullisa.
Gareen qindoomna warra dudhaasaaniitti cichanii kan Muummichi Ministiraa duraanii Silvio Berlusconii teessuma mana maree gajjallaa caalmaa kan mo'atan fakkaatu.
Teessoo 248-268 akka argachuu danda'an tilmaameera; kunimmoo sagalee caalmaa barbaadamu 316 gadidha.
Walii galteefi qindoomina uumuun mootummaa hundeessuun torbeewwan hedduu gaafachuu danda'a.
Bu'aan sun maal jechuudha?
Gaazexaan guyyaa guyyaan maxxanfamu Il Fatto Quotidiano mata-duree fuula jalqabaarratti baaseen: "Waan hunduu ni jijjiirama."
Akka lakkoofsi bu'aa filannoo dursee ba'e agarsiisutti, deggersi warreen uummattummaa hedduu qabanii Brexit fi filannoo Doonaaldi Tiraampi US waliin wal fakkeeffamaa jira.
Lakkoofsi tilmaama filannoo akka agrsiisutti Eurosceptic, farra-hundeeffama Warraaqasa Bakkalcha Shananii kan ta'e qindoomina warra hanga tokko dudhaatti cichu jedhamanitti aansee lammaffaarradha.
Bara 2009 keessa komeediyaanii beekamaa Beppe Grillo, nama siyaasa Xaaliyaan keessatti firaafi hiriyyummaan wal-muuduu balaalleffachuun beekamuun kan hundeeffame Bakkalchi Shanan, jijjiirama guddaa fiduun Xaaliyaan keessatti qofuma isaatiin paartii guddicha teessuma 216-236 mana mare gajjallaati argate ta'eera.
Haarii uummanni hoji-dhabdummaafi dhimma godaantota ilaalchisee qabu Paartii Dimokiraatawaa bulchaa jiru akka miidhamu taasiseera. Kanaafis, qindoomina paartichi keessa jiru tilmaama teessuma 107-127 argachuun sadaffaa ta'eera.
"Kun mo'amuu ifaafi beekamaa akka ta'e nuuf galeera" jedha Ministirri Qonnaa Maurizio Martina.
Bu'aa filannoo waliigalaa baruuf amma saatii dheeraa hin fudhatu.
Xiinxala: Bu'aan Urjii Shananiif - garuu maaltu itti aana?
Gabaasaa BBC Xaaliyaan James Reynolds Milan irraa
Ammallee eenyu akka mo'atu hin beeknu. Amma akka ilaalamaa jirutti garuu Urjiin Shanan carraa argataa jira. Ergaan isaa dargagoota hojii barbaadaniifi warreen iyyeeyyii kibba biyyattii irraa filaniif kan qalbii hawwatedha.
Mootummaa hundeessuuf, Urjiin Shanan kan waliin qindaa'u argachuu qaba. Muuxannoo dhabuun paartii kanaa garuu kan biroo waliin qindaa'ee hojjechuuf rakkisuu ni mala.
Kanaaf, Urjiin Shanan kun garam deeba? Warraaqsichi Paartii Liigii farra godaansa seeraan alaa, kan paartii inni duukaa qindoomina uume caalaa filannoorratti sochii gaarii agarsiise waliin tokkummaa uuma shakkiin jedhu jira.
Tokkoon isaanii keessa ba'uuf duula taasisuu dhiisanillee, Urjiin Shananiifi Liigiin Xaaliyaaniin hariiraa isheen Gamtaa Awurooppaa waliin qabduuf qeeqaa turan. Tokkummaan garee kanaa yaaddoo dhimma Brussels.
Obbo Berlusconi, umuriin isaa 81 ta'e hanga waggaa dhufuutti sababii himannaa gibira miliqsuutiin himatameef ofiin aangootti dhiyaachuu dadhabus, paartiin isaa raawwii gaarii agarsiisaa jira.
Si'a afuriif muummicha ministiraa kan ta'an Obbo Berlusconi pirezedaantii Paarlaamaa Awurooppaa Antonio Tajani biyya akka gaggeessuuf filannoo isaa akka ta'e dubbateera.
Haa ta'u malee, Obbo Salvini -kan godaantota kumaatamaan lakkaa'aman biyyaa ari'uuf waadee seeneefi waa'ee "balaa" Islaamaa kan dubbate, amma bakka kana kajeelaa jira.
Goodayyaa suuraa Mr Berlusconi was ambushed by a topless protester from a feminist activist group as he voted
Hirmaannaan filannoo attam ture?
Akka tilmaama seera qabeessaatti Dilbala uummanni filannoof ba'e %58 akka turedha.
Guutummaa biyyattiitti, buufataawwan filannootti hiriira dheddheeron turan.
Dhimmoonni ijoon maal turan?
Bara 2013 kaasee godaantonni 600,000 ta'an godaansa hamaa karaa Liibiyaa Galaana Mediteraaniyaarraan Xaaliyaan galuuf taasisaniiru.
Lakkoofsi godaantotaa akka malee baayyatu Xaaliyaaniin buufatu kun Xaaliyaanota hedduu abbootii siyaasaa dabalatee haarsuun akka tarkaanfiifi ejjennoo ciccimoo fudhatan taasiseera.
Obbo Berlusconi godaantonni seeraan alaa jiraachuun "boombii hawwaasumaa yeroosaa eeggatee dho'udha" jechuun baayyinaan akka ar'aman gaafatu.
Dinagdeen Itoophiyaa deebiyee babballachuu eegaleera. Haa ta'u malee waggoota 10 darban erga rakkoo dinagdee addunyaa mudateen, dinagdeen Xaaliyaan ammallee %5.7 gadi kan rakkoo dinagdee addunyaa dura tureen gadidha.
Bara 2016, namoonni miliyoona 18 ta'an rakkoo iyyummaaf saaxilamanii hoji-dhabdummaan ammoo %11 irra ture.